XOG: Min Gerard Pique,Robin van Persie Ilaa Ciyaartoyda Aanad Ogayn Ee Maal Qabeenad Ahaa Ka Kubbada Cagta Ka Hor Iyo Halkii Ay Ka Heleen Hantida. - Gool24.Net
XOG: Min Gerard Pique,Robin van Persie Ilaa Ciyaartoyda Aanad Ogayn Ee Maal Qabeenad Ahaa Ka Kubbada Cagta Ka Hor Iyo Halkii Ay Ka Heleen Hantida.
Kubbada cagtu waxay hadda noqotay meel ay da’yarta soo koraysaa u arkaan goob ay si deg deg ah ugu noqon karaan taajiriin maal qabeeno ah waxaana markhaati laga soo ahaa ciyaartoy aan 20 sano jir gaadhin oo maal qabeeno si layaableh ku noqday.
Sanadihii ugu danbeeyay waxaa si layaableh u kordhay qiimaha ciyaartoyda da’yarta ah ee xirfada kubbada cagta leh iyada oo lacago waali ah mushaar loo siinayay xili ayna waxbarashada aas aasiga ah dhamaysan.
Laakiin waxaa jira ciyaartoy caan ah kuwaas oo aan ka taajirin kubbada cagta balse ka hor intii ayna caan noqon ka soo jeeday qoysas maal qabeeno ah balse ay kubbada cagtu u timid xili ay hantiilayaal ahaayeen.
Cilmi-baadhis ay samaysay Global Sports Salary Survey ayaa waxa lagu ogaaday in laacib kasta oo ka ciyaara horyaalka Premier League uu celcelis ahaan toddobaadkii mushahar u qaato £61,024, taas oo sannadkii noqonaysa £3 milyan.
Ciyaartoyda kooxuhu way kala mushahar badan yihiin, waxaana jira kuwo bishii u xaadira in ka badan 1 milyan, laakiin waxa jira jira laacibiin kale oo mushaharooyinka ay ka helaan kubadda cagtu aanay waxba ka ahayn hantidooda oo iyagoo yaryar maalqabeenno ku noqday hanti ay iska leeyihiin qoysaskoodu.
Xiddigaha sida Hugo Lloris, Gerard Pique iyo Patrick Bamford waxay dhasheen iyagoo hantiileyaal ah, kaddibna kubadda cagta waxay usoo galeen kaliya xiise ay u hayaan, halka ay laacibiin badan oo waqtigan dunida laga tixgeliyo ahaayeen sabool shaqo ka dhigtay ciyaaraha.
Qormadan, waxa aanu kusoo gudbinaynaa 11 ciyaartoy oo ka hor intii aanay kubadda cagta soo gelin ahaa tujaar, isla markaana hantidooda ay haystaan ka badnayd waxa ay ka helaan kubadda cagta.
Hugo Lloris: Goolhayaha kooxda Tottenham Hotspur iyo xulka qaranka France ee Hugo Lloris, waxa uu dhashay iyadoo qoyskiisu hodan yihiin oo saamiga uu ka helayo hantida aabbihii ay malaayiin tahay.
Hooyadii oo lagu magacaabo Maric waa sharci-yaqaan guulo kasoo hoysa dacwadaha ay gasho, sidoo kalena aabbihii ayaa maalgelinno ku sameeyey bangiyo, waxaana usoo hoyatay lacago badan xattaa intii aanu Lloris kubadda cagta ciyaaristeeda bilaabin.
Robin van Persie: Waxay dadku ku barteen wacdarihii uu aroomada ka dhigi jiray, gaar ahaan waqtiyadii Arsenal, Manchester United iyo xulkiisa qaranka Netherlands, laakiin waalidkii waxay ahaayeen hantiileyaal tujaar ah ka hor intii aanu ciyaaraha bilaabin.
Aabihii Bob, waa farshaxaniste guulo badan soo hooyey, lacago badanna soo hooyey, hooyadii Jose Ras na waa naqshadeeye dahabka ah iyo naqshadaynta kale ee dhinaca rijniyada iwm.
Gerard Pique: Difaaca Barcelona waxa uu ku guuleystay wax walba intii uu kubadda cagta ciyaarayay, gaar ahaan waqtigiisa Barca, waxaanu guursaday xidigta heesaha reer Colombia ee Shakira, laakiin intaasba ka hor waxa uu ahaa hantiile.
Aabbihii Joan waxa uu sharci-yaqaan iyo ganacsade, hooyadiina waxay agaasime ka ahaan jirtay cusbitaal ku yaalla magaalada Barcelona. Awoowgii Aador Bernabeu waxa uu isaguna ahaan jiray Agaasimaha kooxda Barcelona ee uu hadda u ciyaaro Gerard Pique.
Patrick Bamford: Weeraryahankii hore ee Chelsea, Patrick Bamford waxa uu u ciyaaraa Leeds United oo ka tirsan kooxaha heerka labaad ee Ingiriiska, laakiin waxa uu fursad u haystay inuu tago jaamacadda Harvard University ee waddanka Maraykanka.
Bamford waxa uu qaraako la yahay Joseph Bamford oo ah aasaasaha JCB, waxaanu wax ku bartay dugsi gaar ah, iskuulka sare ee Nottingham High School ayaanu ka baxay.
26 jirkan, imxitaankiisii fasalka 10-aad GCSE, waxa uu wada keenay A* shan ka mid ah maadooyinkiisii, waxaanay taasi siinaysay inuu jaamacadaha ugu qaalisan bilaash ku dhigto.
Mario Gotze: Xiddiga reer Germany, waxa dhalay Jurges Gotze oo ka shaqayn jiray jaamacadda Dortmund University of Technology, laakiin sannadihii 1990meeyadii ayuu qayb ka noqday waaxda Koombiyuutarada Maraykanka ee Yale University.
Waxa uu ahaa nin ahaa hantiile lacag badan sameeyey, waxaanu wiilkiisa ka caawiyey inuu qayb ka noqdo da’yarta kooxda Borussia Dortmund illaa ugu dambayntii uu xiddig weyn noqday.
Andrea Pirlo: Waa halyey kubadda cagta xusuuso waaweyn kaga tegay, laakiin waxa uu kasoo jeedaa qoys magac leh.
Aabaha dhalay Pirlo waxa uu sannadkii 1982-kii aasaasay shirkad ka shaqaysa birta.
Oliver Bierhoff: Inkasta oo uu wax badan kubadda cagta ka gaadhay, una ciyaaray kooxda AC Milan oo uu ahaa hal-doorkii guulaha badan gaadhsiiyey, xulkiisana u ciyaaray 70 kulan, haddana waxa shaqooyinka qaarkood la qaban jiray aabbihii oo lahaa shirkad tamarta ah.
Gianluca Vialli: Halyeyga Chelsea waxa uu kusoo koray guri qolalkiisu gaadhayaan illaa 60. Qasri weyn ah.
Faiq Bolkiah: Waxay uu kasoo jeedaa qoyska Suldaanka Brunei oo hantida ay haystaan lagu qiyaaso in ka badan 20 bilyan oo dollar.
Will Hughes: Maalqabeen qoyskoodu hantiileyaal yihiin oo khadka dhexe uga ciyaaray Watford.
Michael Doughty: Khadka dhexe ayuu uga ciyaaray kooxda Swindon Town, waana wiilka mulkiilaha Nottingham Forest ee Nigel Doughty.
Si kastaba ha ahaatee, xili ciyadii ugu danbeeyay waxay kubbada cagtu isku badashay goob ganacsi oo ay ciyaartoyda da’yarta ahi si deg deg ah ku noqonayaan milyaneero iyaga oo tacab badan galin.